ဘုရားသခင့်လက်တော်၌အိန္ဒိယ – ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောပုလဲ | Lost Sheep for Christ
ဘုရားသခင့်လက်တော်၌အိန္ဒိယ – ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောပုလဲ
အာရုန်သည်ယောသပ်သည်ပေါလု Hackett က (OP) | ဧဝံဂေလိ | 1 1 / 1 4/2020
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောတိုင်းပြည်မှကျွန်ုပ်၏အစ်ကိုများ။ ကောင်းကင်ဘုံနှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုခပ်သိမ်းသောသူတို့အားထာဝရမေတ္တာနှင့်စေလွှတ်တော်မူပြီ။ သင်တို့အားလုံး 1.353 ဘီလီယံ![i] The One, True God သည်အိန္ဒိယလူမျိုးများကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးသင်တို့အားလုံးသည်သူ့အတွက်ထူးခြားသည်။ ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့တခြားနတ်ဘုရားတွေနဲ့မတူအောင်ဘာကထူးခြားတာလဲလို့ငါမေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်။ ညီအစ်ကိုတို့၊ စကြာ ၀ inာ၌ထာဝရဘုရားသခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အခြားအရာမရှိပါ။ လူတ ဦး ချင်းစီတွင်သဘာဝနိယာမတရားကိုရေးသားသောဘုရားသခင်တူညီသည်။[ii] သင်သည်အိန္ဒိယ, ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ဝေစု၏လူများ, သငျသညျသူ၏ရုပ်တုကိုဖွဲ့စည်းကြသည်သည်။ အိန္ဒိယသည်ကမ္ဘာကြီးကိုဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အလွန်နိမ့်သောတိုင်းပြည်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်သည်ကြီးမားလှသည်။ စကြ ၀ inာရှိသတ္တဝါအားလုံးကိုမျှဝေရန်သူသည်အိန္ဒိယရှိကလေးများအတွက်အထူးဂရုပြုမှုရှိသည်။
Christဝံဂေလိဆရာလုကာထံမှယေရှုခရစ်၏သွန်သင်ခြင်းမှ[iii] , “ဟုသူကထွက် သွား. , အခွန်ရုံးထိုင်နေသည်, လေဝိအမည်ရှိသောအခွန်ခံသည်ကိုမြင်သည်ဤပြီးနောက်; ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုမင်းသည် left အရာအားလုံး, နှင့် ထသို့လိုက်ကြ၏။ ထိုနောက်မှလေဝိသည်ကိုယ်တော်အဘို့အလို့ငှါမိမိအိမ်၌ကြီးစွာသောပွဲကိုခံ။ ၊ အခွန်ခံသောသူများနှင့်အခြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်မှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစားပွဲ၌လျောင်းကြ၏။ ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့ကသင်တို့သည်အခွန်ခံသောသူဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်စားသောက်ကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ကျန်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြ။ နာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှါလာသည်မဟုတ်ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါငါလာသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။ ကရုဏာသည်ဂျူးလူမျိုးများသာမကအိန္ဒိယလူမျိုးများအတွက်ပါဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့ ပါဘူး ရုံပညာတတ်ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ခစျြသူကနေမကောင်းငတ်မွတ်, ဆင်းရဲသောသူကိုချစ်သောသူနှင့်သေဆုံး။ ဗြဟ္မဏ၊ ကတ္တရာယယ၊ ၀ ီရှယနှင့်ရှုရုစ် တို့သည်ဤအရာအားလုံးကိုအတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏စားပွဲတွင်ကြိုဆိုကြသည်။ ငါတို့အားလုံးဖျားနေတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာရုံသာမကဝိညာဉ်ရေးအရပိုပြီးပါ ၀ င်ပါသည်။ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး၏ရန်သူမာရ်နတ်သည်လူတိုင်းကိုဆင်းရဲဒုက္ခခံစေလိုသည်။ သူကအိန္ဒိယကိုပိုတန်ဖိုးထားတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? သူသည်ပြိုလဲနေသောသရပ်ဖ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်သောကြောင့်သူသည်အိန္ဒိယယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၏အဖိုးတန်အရာများကိုမြင်သည်။ သင်သည်အသန့်ရှင်းဆုံးသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏လက်ထဲတွင်“ အပြောင်လက်တောက်ပသောအရောင်များ” ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်သည်ကောင်းကင်မှကျပြီးသားတော်ယေရှုခရစ်၏တပည့်တော်အားဤအမိန့်ကိုပေးခဲ့သည်။ တကျိပ်တပါးသောတပည့်တော်တို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့ သွား၍ ယေရှုမှာထားတော်မူသောတောင်ပေါ်သို့တက်ကြလျှင်၊ သူတို့မြင်သောအခါ သူ့ကို ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြ၏ အချို့မူကား၊ ယေရှုသည်အနီးအပါးသို့ချဉ်းတော်မူပြီးလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊ စီရင်ပိုင်သောအခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီ။ သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကိုငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့။ ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါဆုံးမ;ဝါဒပေးကြလော့။ ငါသည်လည်းကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။ 
CCC-1987 (ကက်သလစ်ချာ့ချ်၏ဓမ္မဓိ)္ဌာန်ကျကျ) “ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ် တော်၏ကျေးဇူးတော်သည်ငါတို့ကိုအပြစ်လွတ်စေနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိပြီးယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုငါတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခြင်းခံခြင်းဖြင့် ” ဘုရားသခင်သည်အိန္ဒိယလူမျိုးများကိုအလွန်ချစ်သောကြောင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံရန်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး၏အပြစ်များကိုဆေးကြောရန်ယေရှုကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ တဦးတည်း, မေးပါစေခြင်းငှါ အဘယ်ကြောင့် All- သူသညျဘုရားသခငျ, မည်ဖြစ်ကြောင်း အစွမ်းထက်, လူပုံစံထဲမှာ လာ. , လူသားများအတွက်အသေခံ? သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်သေမှာလား။ “ ငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူသေလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူရှင်လိမ့်မည်ဟုသဘောရှိကြ၏။ ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသောအခါ၊ သေခြင်းတရားသည်အစိုးရလိမ့်မည်မဟုတ်။ သူသေသည့်အချိန်၌သူသည်အပြစ်အတွက်တခါတည်းသေသော်လည်းသူ၏ဘ ၀ သည်ဘုရားသခင်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တရားသေ။ ခရစ်တော်ယေရှု၌ဘုရားသခင်ထံရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ယူမှတ်ရမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဖန်ဆင်းရှင်အားသူ၏သတ္တဝါအားပေးသောအကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူ၌ရှိစေလိုသည်။ စိန့်သောမတ်စ်အကွီနပ်စ်သည်သူ၏နက်ရှိုင်းသောမေးခွန်းကိုသူ၏စာပေများမှ အဖြေပေးသည်၊ Summa Theologica Frist အပိုင်း၊ မေးခွန်း ၂၀ အပိုဒ် ၁ “ ဘုရားသခင်၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုရမည်။ ဒြေ။ အကြောင်းမူကား၊ အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်ကြံပြုမူသောဆရာတိုင်းသည်ကောင်းသောအရာများနှင့်မကောင်းမှုကို ဦး စား ပေး၍ ၎င်းတို့၏အရာဝတ္ထုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးသည်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်အလိုတော်နှင့်အရှိန်အဟုန်တို့၏အရာဝတ္ထုဖြစ်သဖြင့်ဒုစရိုက်သည်ဒုတိယနှင့်သွယ်ဝိုက်သောအရာဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ကောင်းသောဆန့်ကျင်အဖြစ်; ကောင်းကျိုးကိုလိုလားသောအလိုဆန္ဒနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏လုပ်ရပ်များသည်သဘာဝအားဖြင့်မကောင်းမှုနှင့်ဆိုင်သောအရာများမတိုင်မီဖြစ်သင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့် ၀ မ်းနည်းခြင်းသည်ဝမ်းနည်းခြင်းမတိုင်မီဖြစ်သည်၊ မုန်းခြင်းကိုချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ”
ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝအရ Beatific Vision ၌သူ၏ကလေးများအားလုံးကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိသူနှင့်ပေါင်းစည်းရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းပြသရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရား၏ ၀ ိညာဉ်တော်သည်အိန္ဒိယသားများ၊ သင်၏အပြစ်များကိုဆေးကြောရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ဖခင်တစ် ဦး သည်သူ၏သားသမီးများကိုကာကွယ်ရန်၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ အိန္ဒိယကလေးများအတွက်စာငှက်နှစ်ကောင်၏အသက်ကိုရထိုက်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားခမည်းတော်နှင့်သားတော်စပ်ကြားဖြစ်ပေါ်စေသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းရေကိုလွှမ်းမိုးသောဝိညာဉ်တော်တည်း[v] , သင်တို့ရှိသမျှအသက်ရှုပေးသောဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မ သင် Goa တှငျမှေးဖှားတစ်ခုသို့မဟုတ်တက္ကစီယာဉ်မောင်းများမှာခဲ့ကြသည်ညှိုးနွမ်းကိစ္စ ပန်ဂျပ်ကနေလူတိုင်းကိုဘုရားသခငျ၏ သာ. ကောင်းသောအဘို့, ဤလောကသို့ယူဆောင်ခဲ့သည်။ “ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအပြစ်တရားအားဖြင့်ဒဏ်ရာရသောကြောင့်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆုလက်ဆောင်၏ပထမဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ချာ့ချ်ရှိသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မိတ်သဟာယပြုခြင်းသည်နှစ်ခြင်းခံပြီးသားနှစ်ခြင်းခံပြီးအပြစ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောဘုရားသခင့်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုပြန်လည်ရရှိစေပါတယ်။[vi]
ဂင်္ဂါမြစ်ရေသည်အင်ဒီးယန်းအားလုံးအတွက်သန့်ရှင်းသည်ဟုယူမှတ်သော်လည်းငါပြောသောရေသည်သင်တို့အားလုံးအပေါ်ခရစ်တော်ပေးသနားသောအသက်ကယ်ရေဖြစ်သည်။ သခင်သည်လက်များကိုရေ၌နှစ်ပြီးသောအခါခေါင်းပေါ်၌သွန်းလောင်းသောအခါသူသည် “ ငါသည်ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ငါဗတ္တိဇံကိုပေး၏”အ မြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားသမီးတို့၊ သင်တို့ပွဲခံစဉ်တွင်၊ သခင်ကသူ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သွေးကိုသင့်အားမျှဝေလိုသည်။ ထာဝရအသက်ကိုရရန်နှင့်ဘုရားသခင်၏အဆုံးမဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်တွေ့ရန်ဖြစ်သည်။ ခုနှစ်တွင် လုကာအခန်းကြီး 10: အခနျးငယျ 33-37 ယေရှုခရစ်တော်၏ပညတ်တရား၏တစ်ဦးပညာရှင်မှမသနားတျောမူသူ၏သတင်းစကားကိုဝေမျှ သူခရီးသွားအဖြစ်, “ဒါပေမဲ့ရှမာရိ, သူရှိရာသို့ ရောက်. , သူကသူ့ကိုမြင်သောအခါ, သူသနား, သူ့ကို သွား. သူ၏အနာထခညျြနှောငျ, ရေနံနှင့်စပျစ်ရည်ကိုအပေါ်ကိုလောင်း; မိမိတိရစ္ဆာန်ပေါ်မှာ တင်၍ စရပ်တခုသို့ဆောင်သွားပြုစုလေ၏။ နက်ဖြန်နေ့၌ဒေနာရိနှစ်ပြားကိုထုတ်။ စရပ်ရှင်အားပေးလျက်၊ ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါ။ ကုန်သမျှကိုငါပြန်လာသောအခါဆပ်ပေးမည်ဟုဆို၏။ ထိုသူသုံးယောက် တို့တွင်အ ဘယ်သူသည်ထားပြလက်သို့ရောက်သောသူနှင့်စပ်ဆိုင်သောသူဖြစ် သနည်းဟု ပြန်၍ မေးတော်မူလျှင်၊ ကရုဏာတော်ရှိသည်ဟုဆိုသော်၊ ယေရှုကလည်းသွားလော့။ ဘုရားသခင်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများကိုကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများသို့မျှော်လင့်ချက်ပေးသည့်အသိပညာဖြင့်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများတိုးတက်လာခြင်းနှင့်ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၏မြင့်မားသောဝယ်ယူမှုတို့ဖြင့်သင်၏မိသားစုကိုသင်၏ဘဝဟောင်းလမ်းစဉ်ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း“ လစာ” ရရုံသာမကဆင်းရဲချို့တဲ့သူများကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားနာသူများကိုဂရုစိုက်ပြီးအထီးကျန်မှုကိုနှစ်သိမ့်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေရှုကမိမိကိုယ်ကို “ ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်သောကြောင့်သင်တို့သည်အစားအစာများကိုပေးခဲ့ကြသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရေငတ်သောအခါသင်သောက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် anger ည့်သည်ဖြစ်လျက်သင်တို့ကိုကြိုဆိုကြသောအခါငါသည်အဝတ်အချည်းစည်း ရှိ၍ သင်တို့သည်အဝတ်ကိုဝတ်ကြ၏။ ငါသည်ထောင်ထဲမှာနေရသောအခါသင်တို့သည်ငါ့ထံသို့လာကြ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှင်၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့က၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည်မွတ်သိပ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်။ ကိုယ်တော်ကိုလုပ်ကျွေးပါသနည်း။ အဝတ်အချည်းစည်းရှိတော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်။ ကိုယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းပါသနည်း။ ထောင်ထဲမှာနေတော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်။ ? ည့်သည်ဝတ်ကိုကိုယ်တော်အားပြုပါသနည်း။ မင်းကြီးက၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည်ဤသူတည်းဟူသောငါ့ညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားပြုကြသမျှတို့ကိုငါ့အားပြုကြပြီဟု ပြန်၍ မိန့်တော်မူလတံ့။ 
ညီအစ်ကိုတို့၊ သခင်၏စားပွဲပွဲ၌သင်တို့ကိုငါနှိုးဆော်တောင်းပန်၏။ ဖုန်ထူသော လမ်း မှသင်၏ခြေထောက်ကိုဆေးကြောရန် ၊ သင်၏ပခုံးပေါ်မှနာရီကိုယူပြီးသင်၏လက်များနှင့်မျက်နှာများကိုဆေးကြောရန်အတွက်ရေပူအိုးတစ်လုံးအားကျွန်ုပ်အားခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်တော်မျိုး၏အစားအစာများကိုစားပွဲပေါ်တင်။ စားပွဲပေါ်ထိုင်စေတော်မူပါ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သူ၏ပွဲသို့ဖိတ်ကြားခြင်းကိုခံကြရသည်။ ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်အလိုရှိသည့်အရာတစ်ခုမှာသင်၏နှလုံးကိုသူ့အားအပြည့်အဝပေးရန်။ သင့်အားနှစ်ခြင်းခံရန်သူ၏သိုးထိန်းတစ် ဦး ကိုခွင့်ပြုပါ၊ ထို့နောက်သင့်အားသန့်ရှင်းသောဆီဖြင့်ဘိသိက်ပေးသည်။ သင်၏အပြစ်များကိုနောင်တယူပြီးသူ၏တစ်ဆူတည်းဖြစ်သောသန့်ရှင်းသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်နှင့်အပြည့်အဝပေါင်းသင်းပါ။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးတည်းသောဘုရားတို့၏နာမတော်သည်မာရ်နတ်၏ဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ် တင်၍ ထာဝရအသက်သို့ဆောင်ယူနိုင်သောသူဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းကြပါစို့
ထာဝရအများနှင့်အစဉ်အဆက်-အသက်ရှင်သောဘုရား, သင်သည်ဤကျယ်ပြန့် created စကွဝဠာ နှင့်သင့်သားသမီးများနေရာ အညီ မြေကြီးပေါ်မှာ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့အားချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အတွေးအခေါ်နှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာဗဟုသုတများစွာဖြင့်သင်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်“ လောက၏ကျောရိုး” ဖြစ်ရန်သူတို့ကိုသင်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤတိုင်းပြည်ရှိသင့်ကလေးတစ် ဦး ချင်းစီသည်သင်၏ဖန်တီးမှုတွင်အထူးအခန်းကဏ္ has မှပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ကိုသင်၏အမှန်တရားအလင်းဖြင့်လမ်းညွှန်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်ကလေးများ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အမှန်တရားကိုပြန်ပြောင်းပြောပြပါ။ သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းမှတဆင့်သင်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။ ဤအတွက်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏မိခင်နှင့်စိန့်ဂျိုးဇက်၊ မာရိ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းမှတစ်ဆင့်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်နတ်ဆိုးများ၏ကြောက်လန့်မှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းကြသည်။ ဤအမှု၌သခင်ဘုရားသည်ပဌနာပြုလျက်၊ အာမင်။
Aaron Joseph Paul Hackett (OP)
 CCC 364 ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
[iii] လုကာ 5: 27-32
 မ Matthewဲ ၂၈း၁၆-၂၀
[v] ကမ္ဘာ ဦး ၁: ၂
 မ Matthewဲ ၂၈း၁၉
 မ Matthewဲ၂၅း၃၅-၄၀
← भारत – भगवान को हाथ मा मायालु मोती
A PRAYER FOR DELIVERANCE →